Thengisa apha | IPhone iindaba
Yenza intengiso apha
Ukuba ishishini lakho lijolise kwintengiso ye-iPhone, iPod Touch, izixhobo kunye / okanye usetyenziso kuzo zombini iimveliso okanye naluphi na olunye uhlobo lweselfowuni okanye iinkonzo ezinxulumene noko, IPhone iindaba lithuba elihle lokufikelela kubathengi bakho.
I-iPhone eyiyo yeyona webhusayithi iphambili enikezelwe kwi-100% kwi-iPhone Apple ngeSpanish. Fikelela kubathengi abanokubakho abafuna ulwazi malunga ne-iPhone.
Ngenyanga sinokungaphezulu Ukujonga iphepha le-2,5 yezigidi Abasebenzisi abanomdla kwi-iPhone nakwizixhobo zayo. Ngokuthengisa iimveliso zakho kunye neenkonzo kwiwebhusayithi yethu, uya kufikelela kwizigidi zabathengi abanokubakho ngokukhawuleza kwaye ngexabiso eliphantsi.
Ukuqhagamshelana nathi malunga nemiba yentengiso sebenzisa le fomu ilandelayo:
Ndiyamamkela Umgaqo-nkqubo wokuqhutywa kwedatha.
Xa ufaka ifom, idatha enje nge-imeyile kunye negama ziyacelwa, ezigcinwe kwicookie ukuze ungazenzi kwakhona. Ngokuthumela ifom kufuneka wamkele umthetho wethu wabucala.
Injongo yedatha: Phendula izicelo ezifunyenwe kwifom
Umthetho: Imvume yakho ecacileyo
Amalungelo: Ukufikelela, ukulungiswa, ukususwa, ukusikelwa umda, ukuhambisa kunye nokulibala idatha yakho